Marriott Hotel Al Forsan Inogadza Ammar Helal seMutevedzeri Mutsva Wekutengesa uye Kushambadzira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UAE Kuputsa Nhau » Marriott Hotel Al Forsan Inogadza Ammar Helal seMutevedzeri Mutsva Wekutengesa uye Kushambadzira
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • UAE Kuputsa Nhau
MuUAE, Marriott Hotel Al Forsan, hotera ine nyeredzi shanu iri muKhalifa City ine mukurumbira muAbu Dhabi yakagadza Ammar Helal seMutungamiriri mutsva weKutengesa neKushambadzira kwehotera iyi.
Ammar akatanga basa rake neMarriott International muna 2013 sechikamu chechikwata chekutengesa kuMarriott Marquis City Center Doha Hotel uye nguva pfupi yadarika seMulti-Property Director weKutengesa kuTHE ABU DHABI EDITION, Marriott Hotel & Marriott Executive Apartments Downtown Abu Dhabi.
Ammar ine yakasimba yekutengesa kumashure ine makore gumi nemashanu muindasitiri yekugamuchira vaeni. Akaita basa rinokosha mukubudirira kwekutengeserana kwezvivakwa zvake zvekare pamwe nekusimudzira nhengo dzechikwata chake kuti vasvike pazvinangwa zvavo uye kufambira mberi mukati mesangano. Ammar akabatawo zvinzvimbo zvekutengesa kuIHG muDubai uye Abu Dhabi asati ajoinha Marriott.
"Ndiri kufara kujoina timu inohwina kuMarriott Hotel Al Forsan, uye ndinofara kutora dambudziko idzva iri kuunza chigadzirwa chakanakisa ichi pamberi pepasi rose uye mumusika wemuno."
PaMarriott Hotel Al Forsan, Ammar achave nebasa rekutarisa madhipatimendi ekutengesa, kushambadzira, uye zviitiko zvekutengesa pamwe nemabhajeti epagore, zano remari, uye manejimendi ekugovera. Akazviita
hunyanzvi hwekugadzirisa hukama hwebhizinesi nevadyidzani, dhizaini yekuvaka, uye kugoverwa kwebhajeti kuti ive nechokwadi chekubudirira kwekuunganidza kwezvikamu zvakasiyana uye maitiro anotanga munzvimbo dzakawanda.
Ammar ane dhigirii reBachelor mukutungamira bhizinesi kubva kuYunivhesiti yeCentral Florida kuUnited States uye dhigirii re masters muInternational Business kubva kuYunivhesiti yeGeneva.
Isu tinofara kuita kuti Ammar apinde muchikwata cheMarriott Hotel Al Forsan, akadaro David Lance, General Manager. “Achave nhengo yakakosha muchikwata chedu uye tinotarisira kuti iye asimudzire nzira yedu yekutengesa nekushambadzira nehutungamiriri hwake nekubatana mukuenderera mberi nebudiriro yemidziyo yedu. “
Iine anopfuura mazana mashanu nemakumi masere emahotera nenzvimbo dzekutandarira munyika dzinopfuura makumi matanhatu nenzvimbo dzakatenderedza pasirese, Marriott Hotels iri kushandura mafambiro nemativi ese ekugara kwemuenzi, ichibatsira kuzorora, kujeka pfungwa, kumutsa mazano matsva uye kutarisira zvinodiwa nevafambi, vachivasiya vachifemerwa kusvika. kugona kwavo kuzere. Neushingi kuzvishandura kune vafambi venhare uye vepasirese vanosanganisa basa nekutamba, Marriott anotungamira indasitiri nehunyanzvi, kusanganisira iyo Greatroom lobby uye Mobile Guest Services inosimudza chimiro & dhizaini uye tekinoroji. Kuti udzidze zvakawanda, shanya www.MarriottHotels.com. Gara wakabatana neMarriott Hotels pa Facebook, @marriott on Twitter uye @marriotthotels pa Instagram. Marriott Hotels inodada kutora chikamu muMarriott Bonvoy, chirongwa chepasi rose chekufamba kubva kuMarriott International. Chirongwa ichi chinopa nhengo inoshamisa portfolio yemhando dzepasi rose, zviitiko zvakasarudzika pane Marriott Bonvoy Nguva uye mabhenefiti asingaenzaniswi anosanganisira husiku hwemahara uye Elite chimiro chekuzivikanwa. Kuti unyorese mahara kana kuti uwane rumwe ruzivo nezve chirongwa, shanya MarriottBonvoy.marriott.com.